Ahoana ny fitadiavana PDF | Vaovao Gadget
Mikaroka ao anaty PDF
Placeholder sary Laura Torres | 12/05/2022 11:21 | General, Software
Mila mitady teny amin'ny PDF lava be ve ianao nefa tsy hainao ny manao azy? Adino ny teknika fototra amin'ny fanaovana izany amin'ny tanana, ny fandehanana pejy isaky ny pejy mandra-pahitanao ilay teny, misy fomba haingana sy mora hitadiavana PDF.
Noho izany, ato amin'ity lahatsoratra ity isika dia hanazava tsikelikely ny fomba fikarohana PDF miaraka amin'ny ohatra iray mba tsy hanahirana anao amin'ny fitadiavana teny ao anaty rakitra miaraka amin'ity fanitarana ity.
Hatramin'ny nahatongavany ho endrika misokatra dia nanjary mahazatra kokoa ny antontan-taratasy PDF satria mitazà ny fahamarinan'ny endrikao na inona na inona fitaovana ijerena azy: solosaina, smartphone, tablette, sns.
Indraindray mila mikaroka teny ao anaty antontan-taratasy PDF ianao mba hanamafisana ny zava-misy, hahitana fampahalalana manan-danja, na noho ny fahalianana fotsiny. Soa ihany fa fandidiana haingana sy mora izany.
Raha hikaroka teny ao anaty PDF dia hampiasa ny fampiharana ofisialy Adobe izahay, ny orinasa namorona ny endrika PDF. Adobe Acrobat Reader DC dia programa maimaim-poana, izay ahitana milina fikarohana mahomby, ary amin'ny teny Espaniôla ihany koa, izay manamora ny zavatra ho antsika.
1 Alohan'ny hanombohanao: Ampidino ny programa
1.1 Dingana voalohany: Ahoana ny fitadiavana PDF amin'ny teny na teny.
1.2 Dingana faharoa: fikarohana manokana kokoa
2 Mitadiava lahatsoratra amin'ny antontan-taratasy PDF maro
2.1 Mitadiava fisie maromaro indray mandeha: dingana arahina
3 Ahoana no ahafahako mijery sy mitahiry ny valin'ny fikarohana?
Alohan'ny hanombohanao: Ampidino ny programa
Raha tsy manana programa voapetraka mamaky PDF ianao dia afaka misintona Acrobat Reader DC avy amin'ny tranokalanao. Mitandrema fa amin'ny alàlan'ny default dia misintona sy mametraka ny antivirus McAffee ihany koa izy. Raha tsy liana ianao dia esory ny marika ity safidy ity.
Rehefa tafapetraka ny programa dia mandehana mankany sakafo Archive ary sokafy ny PDF izay tianao hotadiavina. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana, noho ny fanamafisana ny rafitra, ny rakitra dia hisokatra ho azy miaraka amin'ny Acrobat Reader DC rehefa manindry ny antontan-taratasy ianao.
Dingana voalohany: Ahoana ny fitadiavana PDF amin'ny teny na teny.
Manaraka, mila mandeha any amin'ny sakafo ambony ianao Ovay ary tsindrio ny safidy fikarohana eo akaikin'ny mariky ny binocular. Fomba hafa haingana kokoa ny fampiasana baiko klavier raha tianao:
tsindrio ny baiko CTRL + F raha mampiasa Windows ianao na CMD + F Raha mampiasa Mac ianao dia hisokatra ny varavarankely fitadiavana izay ahafahanao mitendry ny teny tianao hotadiavina. Mba hahatsiarovanao an'io baiko io dia azonao eritreretina ny teny fikarohana amin'ny teny anglisy: "hitadiavana", ka ny litera voalohany amin'ny teny dia ilay miaraka amin'ny CTRL.
Dingana faharoa: fikarohana manokana kokoa
Raha mila fikarohana amin'ny antsipiriany kokoa dia tsindrio CTRL + Shift + F amin'ny Windows na CMD + Shift + F amin'ny Mac. Hanokatra ny fikarohana mialoha:
*Ny “Shift” dia manondro ny fanalahidy ampiasainao hanoratana litera lehibe iray, izay misy kisary arrow miakatra. Ny fanalahidy izay eo ambonin'ny Ctrl fotsiny.
eto azonao atao ny mikaroka ny antontan-taratasy PDF rehetra ao anaty lahatahiry manokana, fa tsy ny lahatahiry ankehitriny ihany. Azonao atao mihitsy aza ny mikaroka teny, tsoratadidy ary fanehoan-kevitra. Ary koa, misy boaty fanondroana raha te hampifanaraka ny litera lehibe sy kely ianao.
Mitadiava lahatsoratra amin'ny antontan-taratasy PDF maro
Acrobat Adobe PDF dia mandroso dingana kokoa, afaka mikaroka antontan-taratasy maromaro indray mandeha ianao!. Ny varavarankelin'ny fikarohana dia ahafahanao mikaroka teny amin'ny antontan-taratasy PDF maro indray mandeha. Ohatra, azonao atao ny mikaroka ireo antontan-taratasy PDF rehetra na manokatra Portfolio PDF amin'ny toerana manokana. Tsy maintsy raisinao fa raha misy encryption ny antontan-taratasy (efa nampiharina ny fepetra fiarovana), dia tsy azo ampidirina amin'ny fikarohana. Noho izany, mila manokatra tsirairay ireo antontan-taratasy ireo ianao mba hikaroka tsirairay ny rakitra tsirairay. Na izany aza, ireo antontan-taratasy voakodia ho Adobe Digital Editions dia maningana amin'ity fitsipika ity ary azo ampidirina ao amin'ny vondrona antontan-taratasy hikaroka. Avy eo dia mandeha any izahay.
Mitadiava fisie maromaro indray mandeha: dingana arahina
Sokafy ny Acrobat eo amin'ny desktop (tsy amin'ny navigateur web).
Ataovy ny iray amin'ireto hetsika manaraka ireto.- Ao amin'ny bara fitadiavana, soraty ny lahatsoratra tianao hotadiavina, ary fidio avy eo misokatra fikarohana feno an'ny Acrobat ao amin'ny menio mipoitra.- ao amin'ny boaty fikarohana, soraty ny lahatsoratra tianao hotadiavina.
Amin'ity varavarankely ity, safidio ny antontan-taratasy PDF rehetra. Ao amin'ny menio mipoitra eo ambanin'ny safidy, safidio karohy aiza.
Mifidiana toerana iray amin'ny solosainao na amin'ny tambajotra iray ary tsindrio manaiky.
Mba hamaritana fepetra fikarohana fanampinyClick Asehoy ny safidy mialoha ary mamaritra ny safidy mety.
Amin'ny maha-tetika azy, mandritra ny fikarohana dia azonao atao ny manindry ny valiny na mampiasa baiko fitendry mba hivezivezena amin'ny valiny tsy manapaka ny fikarohana. Raha tsindrio ny bokotra fijanonana eo ambanin'ny bara fandrosoana dia nofoanana ny fikarohana ary voafetra amin'ny hetsika hita hatreto ny valiny. Tsy mihidy ny varavarankelin'ny fikarohana ary tsy voafafa ny lisitry ny valiny. Noho izany, raha te hahita valiny bebe kokoa ianao dia mila mitady fikarohana vaovao.
Ahoana no ahafahako mijery sy mitahiry ny valin'ny fikarohana?
Aorian'ny fanaovana fikarohana avy amin'ny varavarankelin'ny fikarohana, ny valiny dia aseho amin'ny filaharan'ny pejy, mivondrona indray eo ambanin'ny anaran'ny antontan-taratasy nokarohina tsirairay. Ny singa tsirairay ao amin'ny lisitra dia misy teny manodidina (raha azo atao) ary kisary manondro ny karazana fisehoan-javatra.
Mankanesa any amin'ny ohatra manokana amin'ny valin'ny fikarohana. Amin'ny PDF tsirairay ihany no azo atao.
- Hanitatra ny valin'ny fikarohana, raha ilaina. Avy eo mifidiana ohatra iray amin'ny valiny mba hijerena azy amin'ny PDF.
- Raha te hahita tranga hafa dia tsindrio ny valiny hafa.
Alaharo ny tranga amin'ny valin'ny fikarohana. Fidio ny safidy sakafo mba amin'ny faran'ny varavarankely fikarohana. Azonao atao ny mandamina ny valiny araka ny maha-zava-dehibe azy, ny daty novaina, ny anaran-drakitra, na ny toerana.
Tehirizo ny valin'ny fikarohana. Azonao atao ny mitahiry ny valin'ny fikarohanao ho rakitra PDF na CSV. Ny rakitra CSV dia vita amin'ny latabatra, ka raha te hanokafana azy dia mila manao izany amin'ny programa Excel ianao. Raha hamita, tsindrio ny kisary diskette ary misafidy ny hitahiry ny valiny ho PDF na tehirizo ho CSV ny valiny.
Manantena aho fa nahasoa anao ity fampahalalana ity, araka ny hitanao, asa tena tsotra ny fitadiavana teny amin'ny PDF.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Mikaroka ao anaty PDF
Ny vidiny sy ny datin'ny famoahana ny Doogee S98 Pro dia efa fantatra
AnkerWork B600 webcam ho an'ny streaming sy telecommuting [Famerenana]